VaultPress Nọgidere Na-echekwa WordPress | Martech Zone
M na-anọdụ na Automattic othlọ ntu na Blog World Expo (ike ime ihe ike) ma soro ndị otu WordPress nwee mkparịta ụka dị ukwuu gbasara ọtụtụ ọrụ anyị rụrụ ọrụ yana ịkọwa mgbanwe na nsogbu anyị na ndị ahịa anyị na-arụ. Otu n'ime nchegbu ndị ahụ bụ nchekwa na nkwado ndabere na mpaghara.
Ọ bụ ihe ijuanya na anọ m na WordPress obodo ruo nwa oge, mana m ka na-anụ maka mmemme na ngwa ndị anọgoro kemgbe ọtụtụ afọ ma ahụbeghị m ha! Otu n'ime ndị ahụ bụ VaultPress. VaultPress bụ ọrụ ị nwere ike itinye na WordPress nke gị na-akwado onwe gị nke ga-enyocha nchekwa nke blog yana ịdebe nkwado nke ọdịnaya ahụ.
Nke a bụ nyocha vidiyo nke VaultPress:
N'adịghị ka ọrụ nkwado ndabere na saịtị ndị ọzọ, VaultPress na-echekwa nchekwa ndabere saịtị ka ị na-ede… dị ka atụmatụ nchekwa akpaaka n'ime nchịkọta akụkọ WordPress. Dị jụụ!
Akụkụ ọzọ dị ukwuu nke VaultPress bụ na ọ na-enyocha mgbanwe ọ bụla na ntinye koodu WordPress gị. Ọzọkwa, uru nke a bụ na otu ezinụlọ Automattic ahụ na-etolite na nyiwe WordPress na-ede nyocha nlekota nke na-eme ka ị nwee nchekwa. Ihe mgbakwunye ma ọ bụ plugins na-enweghị nchebe na-abụkarị ọnụ ụzọ ámá maka ndị na-agba ọsọ ịbanye na ntinye koodu na ibe ndị ọzọ n'ime WordPress, na-eme ka saịtị gị bụrụ ọnụ ụzọ maka ndị na-eme ihe ọjọọ.
VaultPress bu oru ugwo, mana odi ezigbo onu atụmatụ ndị dị na $ 15 ka $ 350 kwa ọnwa (maka ụlọ ọrụ). Anọ m na-anwale MyRepono mana ọ bụghị ngwa mgbakwunye dị mfe iji - ya mere agbanweela m VaultPress!